Ukudibanisa kunye nokwahlula iiseli zetheyibhile kwi-Dreamweaver
Ngamanye amaxesha, indlela elula yokuguqula inani leeseli kwitafile kwi-Dreamweaver yile hamba iiseli (dibanisa iiseli ezimbini nangaphezulu) okanye Umehlulelwano iiseli (ukwahlula iseli enye kwimiqolo emibini okanye nangaphezulu okanye kwiikholamu). Ngolu buchule, unokwahluka indawo kumacandelo etafile kwaye wenze ngokwezifiso izakhiwo zetafile.
Umzekelo, unokufuna indawo ende yeseli ngaphezulu kwetafile yakho yesibhengezo kunye neeseli ezininzi ezantsi kwayo ukuze ukwazi ukulawula isithuba phakathi kweekholamu zombhalo okanye imifanekiso. Ezi seti zimbini zamanyathelo alandelayo zibonisa indlela yokudibanisa kunye nokwahlula iiseli etafileni.
Ukudibanisa iiseli kwitafile esele ikho, landela la manyathelo:
Gqamisa iiseli ezimbini okanye ezingaphezulu ezikufutshane ngokucofa kunye nokutsala imouse ukusuka kwiseli yokuqala ukuya kweyokugqibela.
Unokudibanisa kuphela iiseli ezikufutshane nenye.
Cofa kwindawo yokudibanisa iiseli ezikhethiweyo usebenzisa i-icon ye-Spans, kwingingqi esezantsi ekhohlo yoMhloli wePropati, ukudibanisa iiseli ezikhethiweyo kwiseli enye.
Iiseli zidityaniswe kwiseli enye ngokusebenzisa iikholppanokanyeububanzi bomqoloiimpawu. Ezi mpawu ze-HTML zenza ukuba iseli enye idityaniswe kunye neeseli ezikufutshane ngokufaka imiqolo eyongezelelweyo okanye iikholamu kwitafile.
Ukwahlula iseli, yenza itafile entsha okanye uvule iphepha elinetafile esele ikho kwaye ulandele la manyathelo:
Cofa ukubeka isikhombisi ngaphakathi kuyo nayiphi na iseli ofuna ukwahlulahlula.
Cofa iSlit Split kwiiRows okanye kwiikholamu icon, kwingingqi esezantsi ekhohlo yomhloli wePropathi.
Ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko ivela.
Cofa kwimiqolo okanye kwiikholamu kwibhokisi yencoko, kuxhomekeke kwindlela ofuna ukwahlula ngayo iseli.
Ungahlula-hlula iseli kulo naliphi na inani lemiqolo okanye iikholamu ezintsha.
Chwetheza inani lemiqolo okanye iikholamu ofuna ukuzenza.
Iseli ekhethiweyo yahlulahlulwe ngenani lemiqolo okanye iikholamu ozifakileyo.
I-tylenol enekhowudi yekhowudi 3
i-generic ye-dexilant 60 mg
yintoni ingcambu etyheli elungileyo
i-ammonium lactate i-12 lotion
isikhonkwane 3350 akukho intshukumo wamathumbu